नेपालको दु:खमा सधै साथ दिने जापानमाथि नै पर्यो ठुलो दु:ख : ४९ को मृ*त्यु, २०० घा’इते ! - Daily Lokmandu
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नेपालको दु:खमा सधै साथ दिने जापानमाथि नै पर्यो ठुलो दु:ख : ४९ को मृ*त्यु, २०० घा’इते !
जापानमा शनिबार र आईतवार आएको आँधीमा परि मर्नेको संख्या सँगै घा’इतेहरुको संख्या समेत बड्दै गएको छ । पछिल्लो समाचार अनुसार मृ’तकको संख्या ४९ पुगेको छ भने घाइते हुनेहरुको संख्या २०० नाघेको छ ।
फुकुसिमा केनमा मृ’तक संख्या क्रमिक रुपमा बड्दै जान थालेपछि आँधीका कारण मर्नेहरुको संख्या उकालो लागेको हो । जानकारी अनुसार फुकुसिमा केनमा मात्रै अहिले सम्म १६ जनाको ‘मृत्‍’यु भएको छ । मियाजाकी केनमा १०, खनागावा केनमा ५, तोचिकी र गुम्बा केनमा ४र४ जनाको मृ’त्‍यु भएको सम्बन्धीत अधिकारीहरुले पुष्टि गरेका छन ।
एन एच् के तेलिभिजनले आफ्नो वेब साइडमा उल्लेख गरेको समाचार अनुसार बेपत्ताहरुको संख्या १४ छ । अहिले सम्मको विवरण अनुशार साइतामा, सिजुओखा र इवातेकेनमा २र२ जना र नगानो, इवाराकी, चिवाकेनमा १र१ जनाको मृत्‍’यु भएको छ ।
आँधीका कारण घाइते भएका २०४ जनाको बिभिन्न अस्पतालमा उपचार भैरहेको समाचारमा जानाइएको छ । बेपत्ताहरुको खोजी कार्य पनि जारी रहेको समाचारमा उल्लेख छ । उ’द्दार कार्य जारी रहेकाले मृतक र घा’इतेहरुको संख्या अझै बढ्न सक्ने अधीकारीहरुले बताएका छन् । प्रभाबित क्षेत्रमा भैरहेको बर्षाका कारण उ’द्दार कार्यले गति लिन सकिरहेको छैन ।